နိုင်ငံလက်ရွေးစင် ကစားသမားဘဝကို လက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ တင်မ်ကာဟေးလ်
နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းက အနားယူကြောင်း ကြေညာခဲ့တဲ့ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး တင်မ်ကာဟေးလ်
17 Jul 2018 . 12:20 PM
သြစတြေးလျအသင်းရဲ့ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး တင်မ်ကာဟေးလ် Tim Cahill က နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းက အနားယူကြောင်း တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သြစတြေးလျအသင်းရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူပေးထားတဲ့ တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ တင်မ်ကာဟေးလ် Tim Cahill က နိုင်ငံအသင်းအတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ (၄)ကြိမ်ဆက် ပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပြီးနောက် ကစားသမားဘဝက အနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ (အင်္ဂါနေ့)မှာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းက အနားယူကြောင်း အသက် (၃၈)နှစ်အရွယ်ရှိ ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး တင်မ်ကာဟေးလ် Tim Cahill က ကြေညာခဲ့တာပါ။ တင်မ်ကာဟေးလ် Tim Cahill အနေနဲ့ သြစတြေးလျအသင်းအတွက် (၁၀၇)ပွဲအထိ ကစားပေးခဲ့ပြီး ဂိုး (၅၀)အထိ သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
သြစတြေးလျအသင်းရဲ့ သမိုင်းမှာ ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူပေးခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ တင်မ်ကာဟေးလ် Tim Cahill ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ဆက်ကစားပေးဖို့ ပရိသတ်တွေက ဆန္ဒရှိနေခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ လက်ရှိချန်ပီယံဘွဲ့ကို ကာကွယ်ရမယ့် ၂၀၁၉ အာရှဖလားပြိုင်ပွဲမှာ တင်မ်ကာဟေးလ် Tim Cahill လို ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကို ပါဝင်ကစားပေးဖို့ ပရိသတ်တွေက တောင်းဆိုမှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တင်မ်ကာဟေးလ် Tim Cahill ကတော့ အသက်အရွယ်ပိုင်းအရ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ဆက်ကစားပေးဖို့ မလွယ်ကူတော့တာကြောင့် အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံလက်ရွေးစင် ကစားသမားဘဝ အောင်မြင်မှုများ
၂၀၁၅ – အာရှဖလားချန်ပီယံ
၂၀၀၄ – သမုဒ္ဒရာပိုင်းဇုန်ချန်ပီယံ
Photo:WWOS – Nine, Goal.com
နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးက အနားယူကွောငျး ကွညောခဲ့တဲ့ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး တငျမျကာဟေးလျ
သွစတွေးလအြသငျးရဲ့ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး တငျမျကာဟေးလျ Tim Cahill က နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးက အနားယူကွောငျး တရားဝငျကွညောခဲ့ပါတယျ။ သွစတွေးလအြသငျးရဲ့ သမိုငျးတဈလြှောကျ ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးယူပေးထားတဲ့ တိုကျစဈမှူးအဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့ တငျမျကာဟေးလျ Tim Cahill က နိုငျငံအသငျးအတှကျ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ (၄)ကွိမျဆကျ ပါဝငျကစားပေးခဲ့ပွီးနောကျ ကစားသမားဘဝက အနားယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီနေ့ (အင်ျဂါနေ့)မှာ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးက အနားယူကွောငျး အသကျ (၃၈)နှဈအရှယျရှိ ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး တငျမျကာဟေးလျ Tim Cahill က ကွညောခဲ့တာပါ။ တငျမျကာဟေးလျ Tim Cahill အနနေဲ့ သွစတွေးလအြသငျးအတှကျ (၁၀၇)ပှဲအထိ ကစားပေးခဲ့ပွီး ဂိုး (၅၀)အထိ သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ နိုငျငံလကျရှေးစငျအသငျးရဲ့ ထိပျတနျးတိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈပါတယျ။
သွစတွေးလအြသငျးရဲ့ သမိုငျးမှာ ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးယူပေးခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးတငျထားတဲ့ တငျမျကာဟေးလျ Tim Cahill ကို ၂၀၁၉ ခုနှဈအထိ နိုငျငံအသငျးအတှကျ ဆကျကစားပေးဖို့ ပရိသတျတှကေ ဆန်ဒရှိနခေဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ လကျရှိခနျြပီယံဘှဲ့ကို ကာကှယျရမယျ့ ၂၀၁၉ အာရှဖလားပွိုငျပှဲမှာ တငျမျကာဟေးလျ Tim Cahill လို ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကို ပါဝငျကစားပေးဖို့ ပရိသတျတှကေ တောငျးဆိုမှုတှေ ပွုလုပျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ တငျမျကာဟေးလျ Tim Cahill ကတော့ အသကျအရှယျပိုငျးအရ နိုငျငံအသငျးအတှကျ ဆကျကစားပေးဖို့ မလှယျကူတော့တာကွောငျ့ အနားယူဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာဖွဈကွောငျး ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
နိုငျငံလကျရှေးစငျ ကစားသမားဘဝ အောငျမွငျမှုမြား
၂၀၁၅ – အာရှဖလားခနျြပီယံ
၂၀၀၄ – သမုဒ်ဒရာပိုငျးဇုနျခနျြပီယံ
by Naing Linn . 23 mins ago